Akpụkpọ ụkwụ Sandals: Faịọrọ Ọrụ onsrụ Ọrụ Dịịrị Travel Travel
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Ịrụ ọrụ » Akpụkpọ ụkwụ Sandals: Faịọrọ Ọrụ onsrụ Ọrụ Dịịrị Travel Travel
Akụkọ Antigua & Barbuda • Akụkọ ọhụrụ Barbados • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • omenala • Education • Akụkọ Grenada na -agbasa • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • investments • Akụkọ gbasara Jamaica • Akụkọ okomoko • Nzukọ Mmekọrịta Akụkọ • nzukọ • News • Resorts • Ịrụ ọrụ • Akụkọ Lucuc na -agbasa • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Ndị Turks na Caicos Breaking News • Akụkọ dị iche iche
Ọrụ pụrụ iche nke Akpụkpọ ụkwụ Sandals ịzụlite obodo ndị dị na Caribbean ma nyekwa olileanya na ndụ ndị bi na mpaghara a amatala ọzọ dịka akpọrọ ya "Favorite Responsible / Philanthropic Travel Foundation" na ama ndị nnọchi anya 'Choice Awards for nke abụọ n'afọ kwụ ọtọ. Ekwuputara ọkwa a na mmemme ụlọ ọrụ njem njem Canada nke emere nke ọma na Ọktọba 1, 2020.
Tọrọ ntọala Sandals Foundation na 2009 site na osote onye isi oche nke Sandals Resorts International, Adam Stewart, iji gbasaa ọrụ ọrụ ebere bụ nke bụ isi ọrụ nke agbụ ụlọ okomoko ebe ọ meghere ọnụ ụzọ ya 39 afọ gara aga.
“Caribbean bi, na ndị bi na ya bụ ezinụlọ. Adam Stewart, osote onye isi oche Sandals Resorts International kwuru na anyị na-agbasi mbọ ike itinye ego n'ụlọ anyị na inye ohere ndị na-enyere ndị mpaghara mpaghara anyị aka ikwere ma mepụta ọdịnihu dị mma nye onwe ha na ọgbọ ọdịnihu.
E guzobere Agents 'Choice Awards na 1999 site na Baxter Media nke dị na Toronto na akwụkwọ ndị a ma ama, Canadian Travel Press na Travel Courier. Nyocha a na-eme kwa afọ bụ nlele kachasị ukwuu nke ndị ọrụ njem njem Canada na-ahọrọ ndị na-ebute ha njem kachasị amasị ha n'ụdị dị iche iche. N'afọ a, ọbụlagodi n'oge ọrịa COVID-19, ihe ruru ndị ọkachamara puku isii na-eme njem na Canada na-atụ vootu na ngalaba 6,000.
Stewart, onye bụkwa Onye isi oche nke Sandals Foundation, kwupụtara, sị: “Obi dị anyị ezigbo ụtọ na ndị ọrụ njem njem dị ịtụnanya gafee Canada ji onyinye a. Ha bụ ndị mmekọ dị oke egwu nke na-eme ka ọrụ anyị kwe omume. Mụ na ndị otu anyị, ndị ọbịa anyị, na ndị mmekọ anyị enweela ezigbo mmetụta na ndụ ihe karịrị mmadụ 990,000. ”
Na 2019, Ngalaba Global Communications nke United Nations nakweere Sandals Foundation dị ka otu n'ime ụlọ ọrụ ndị mbọ ha na-atụnye ụtụ dị ukwuu na itinye Agenda for Sustainable Development and the Sustainable Development Goals (SDGs).
Ọbụna dịka mpaghara ahụ nwere enweghị mgbagwoju anya n'ihi mmetụta nke ọrịa COVID-19, Ntọala ahụ nọgidere bụrụ mgbama, na-enye enyemaka na nkwado maka ezinụlọ na ọrụ mmekọrịta.
Heidi Clarke, onye isi oche na Sandals Foundation, kwuru na ọrụ ebere a na-edebanye aha ga-anọgide na-eme akụkụ ya iji hụ na agwaetiti asatọ ha na-arụ ọrụ na-aga n'ihu maka ọdịnihu na-aga n'ihu.
“Dị ka nzukọ mpaghara, ọ bụ ebumnuche anyị itinye ego na mmepe mmepe nke Caribbean. Anyị ga-anọgide na-ewusi obodo ike, tinye ego na mmuta na agụmakwụkwọ, na-akwado ndụ, na-etinye ndị ntorobịa anyị, na-enyere ndị nọ ná mkpa aka, na-eme ka ahụike sie ike, ma na-echekwa gburugburu ebe obibi site na mmemme mgbanwe ndụ nke na-eme ka ndụ dị ike, ”ka Clarke kwuru.
Sandals Foundation na-arụ ọrụ na Jamaica, St. Lucia, Grenada, Antigua, Barbados, Turks na Caicos, na The Bahamas na-arụ ọrụ na mpaghara agụmakwụkwọ, obodo, na gburugburu ebe obibi.